China 4 poindi angular kuonana bhora turntable slewing mhete fekitari uye vagadziri | Wanda
4 poindi angular kuonana bhora turntable slewing mhete
MuXuzhou slewing inobereka zvigadzirwa, chikamu cheiyo yepamusoro-chaiyo, yepamusoro-tekinoroji uye yakakwira kukosha-yakawedzera zvigadzirwa yakaderera, uye yepamusoro-magumo kuuraya mabheyaringi achiri kuvimba nekutengeswa. Panyaya yekutsvaira inobereka kugadzira tekinoroji, mazhinji eXuzhou slewing anotakura makambani ane kunonoka kukura kwekugadzira maitiro uye tekinoroji yekushandisa, uye kudzora kwenhamba uye otomatiki ekugadzirisa michina akaderera; maitiro ekurapa kwekupisa nemidziyo yakakosha kuhupenyu uye kuvimbika kweye slewing bearings inoda kuvandudzwa. Iko kutsvagisa nekusimudzira kwezvinhu zvitsva zvinodiwa pakuuraya mabheyaringi uye kutsvagisa pamwe nekuvandudzwa kwezvimwe zvekubatsira zvigadzirwa nemaitiro hazvigone kusangana nezvinodiwa zvekucheka zvinotakura zvigadzirwa nemhando. Nekuda kweizvozvo, maitiro ekugona indekisi akaderera, kusachinja-chinja kushoma, kupararira kwechigadzirwa kugadzirisa kukura kwakakura, uye hunhu hwepamoyo hwezvigadzirwa. Kusagadzikana kunokanganisa kurongeka, kuita, hupenyu, uye kuvimbika kwerin'i yekucheka.
Iyo slewing kuberekaindasitiri indasitiri inowedzera mari uye inoshandisa tekinoroji. Mushure memakore ekuvandudza, iyo Xuzhouslewing kuberekaindasitiri yakatanga kusimbisa yakakwana indasitiri zviyero. Tsvagiridzo uye
kusimudzira kugona kwemakambani anotakura akakwenenzverwa akavandudzwa zvakanyanya, asi zvichienzaniswa nenyika dzakabudirira, ivo vari kusimukira nekugadzira tekinoroji kuvandudza, michina yekushandisa uye zviridzwa zvekuyedza. Pane
zvakadaro zvimwe zvipenga mumativi akadaro.
Kuti ikwidziridze chikamu chayo mumusika wepamusoro-soro, Xuzhou's yakasimba kuseta inobereka vagadziri vane capital uye technical simba vari kuramba vachiwedzera mari yavo muR & D. Semuyenzaniso, SlewingMhete yave ichikudziridza indasitiri zviyero kubvira 2011. Zvimwe zvakaomarara zvemukati zvemukati zviyero kuona kuti iyo slewing inotakura geometry inowedzerazve kuvandudzwa; iyo yakadzika yeiyo yakaoma sosi yakawedzerwa; hupenyu hwehupenyu hwemhete yekucheka hwakawedzerwa; kutsvagisa nekusimudzira zvinhu zvinodzivirira zvinosimbiswa; uye kushandiswa kwerin'i rinosimudza kunosimudzirwa; Kuvandudzwa kwemidziyo, kushandiswa kwekombuta yekufananidza tekinoroji ye
iko kusimbiswa kweyeye yekucheka mhete inobata chinzvimbo, chigadzirwa chigadzirwa mune saizi yekugadzirisa dhizaini. Panguva imwecheteyo, mabhizinesi mazhinji muXuzhou slewing akatakura akatangawo kuteerera kutsvagisa uye kushandiswa kweyeye yekucheka mhete yakakosha tekinoroji uye zvine hukama matekinoroji.
Zvinofanira kutaurwa kuti mumakore achangopfuura, xuzhou slewing kubereka kwave kukurumidza uye kunaka slewing mabheyaringi zvakakwirira. Panguva iyoyowo, pamwe chete kuramba kuvandudzika chekambani uchishandisa vanokwanisa uye kugadzirwa kunyatsoshanda, Xuzhou slewing mabheyaringi nguva dzose kuramba kwikwidzana nani mumhuri kumusika mumhuri musika.
Vazhinji vashandisi vaisaziva zvakakwana nezvekuisirwa kweringi rinoshoreka, kazhinji zvichikonzeresa kushanda zvisina kufanira kwerin'i inokatyamadza nekuda kwekukanganisa kwekuisa kana zvisirizvo, senge kutenderera kusingachinjiki, kurira kusingaite, nezvimwewo, nhasi zvichitungamirwa neDzidza maitiro ekuisa zvindori zvekusona uye kuuraya mabheyaringi kuitira kuti munhu wese agone kudzikisa matambudziko nekukanganisa pakuisa zvindori zvekusona.
Kutanga, usati waisa rin'i yekucheka, zvinoda kuti uongorore nzvimbo inokwira yemuchina mukuru. Zvinotarisirwa kuti nhengo inotsigira inofanirwa kunge iine simba rakaringana, iyo yekubatanidza nzvimbo inofanira kuvezwa, uye iyo yepamusoro inofanira kutsetseka uye isina zvidhoma nemabhureki. Kune avo asingakwanise kugadzirwa kuti vabudirire flatness inodikanwa, mapurasitiki akakosha ane simba rejekiseni rakakura anogona kushandiswa se mafirita kuti ave nechokwadi chekukwira kwendege inokwira uye kudzikisa kudengenyeka. Iyo rin'i yekumira yekutakura inosimudza ine yakaoma yakaoma nzvimbo, inoiswa S pamagumo kumeso kweiyo ferrule. Paunenge uchiisa, iyo tepi inoshanduka inofanirwa kuiswa munzvimbo isiri mutoro kana mune isiri-
inowanzoitika nzvimbo (iyo plug plug inogara iri munzvimbo yakapfava.).
Chechipiri, kana uchiisa rin'i rinodonhedza, kumisa padanho kunofanirwa kuitirwa pekutanga, sunga-sungisa iyo inosungira mabhaudhi, uye tarisa kutenderera kwekutakura. Kuti uve nechokwadi chekutakura kwakatsetseka, magiya anofanirwa kuongororwa zvisati zvasungwa mabhaudhi akasimbiswa. Kana uchisimbisa bhaudhi, panofanirwa kuve nesimba risati rasunga, uye pre-tightening simba inofanirwa kunge iri 70% yemuganhu wegoho rechinhu chebhaudhi. Iwo anosimudza mabhaudhi anofanirwa kuve akashongedzerwa nema flat washer. Izvo zvinorambidzwa kushandisa echinyakare ma washer. Mushure mekumiswa kweiyo slewing kubereka kwapera, inoiswa mukushanda. Mushure memaawa zana ekuenderera mberi kwekushanda, zvinoda kuti uongorore zvizere kana pre- kuomesa torque yeiyo inosimudzira bhaudhi inosangana nezvinodiwa. Kuongorora kuri pamusoro kunodzokororwa kamwe chete mumaawa mazana mashanu ekuenderera mberi kwekushanda.
Yetatu, rin'i yekucheka inofanirwa kuzadzwa neiyo yakakodzera girisi mushure mekumisikidzwa, uye inofanira kuzadzwa nemativi ekuchinjisa mativi kuitira kuti girizi igove zvakaenzana. Mushure menguva yekushanda nguva, iyo yekucheka mheteKutakura kucharasikirwa chikamu chemafuta. Naizvozvo, iyo yekucheresa mhete yekutakura inofanirwa kuzadzikiswa kamwe chete kuma50 kusvika kumaawa zana mukuita kwese. Zvekutsvaira mabheyari anoshanda munzvimbo dzakakwirira dzekupisa kana mune guruvamamiriro, iyo nguva yekuwedzera mafuta ekuzora inofanira kunge ipfupi. Kana muchina uchinge wavharwa kuti uchengetedze, unofanirwawo kuzadzwa nemafuta akakwana.
4. Panguva yekufambisa, mabheyari anofanirwa kuiswa akatenderera pamotokari. Matanho anofanirwa kutorwa kudzivirira kutsvedza uye kudzivirira vibration. Kana zvichidikanwa, wedzera zvinobatsira zvekubatsira.
5. Bearings inofanira kuiswa yakatambarara pane yakaoma, inofefetera, uye yakati sandara nzvimbo. Kuchengetedza kunofanirwa kusarudzika kubva kumakemikari uye zvimwe zvinokanganisa zvinhu. Kana seti dzakawanda dzemabheyari dzichida kuiswa uye dzakarongedzwa, matatu kana kupfuura akaenzana-kureba matanda spacers anofanirwa kuiswa zvakaenzana munzira yakatenderedza pakati peimwe seti, uye epamusoro neyezasi spacers anofanirwa kuiswa munzvimbo imwechete. Mabheyari anoda kuramba achichengetwa kupfuura iyo ngura-chiratidzonguva inofanira kucheneswa uye ngura-proofed zvakare.
Pashure: Fekitori Kupa Yakakwira Yakakwira Yakatatu Row Roller Slewing Kubereka
Zvadaro: Makara matatu roller Slewing inotakura nemutoro unorema weiyo vhiri crane
Kunze Gear Slewing Bearings